Dowlada jarmalka oo ku dhawaqday inee yareen doonto Cayrta lasiiyo soo galootiga
Saturday September 09, 2017 - 17:31:03 in Wararka by Ali Adan
Wasiirka Arimaha Gudaha dalka jermany oo saaka Ka dhawaajiyey in Caydha la dhimi doono
wasiirka arimaha gudaha dalkan Jaramlka Thomas de Maiziere ayaa saaka warbaahinta u sheegay in lacagta caydha ee lasiiyo qoxootiga ay tahay mid aad u badan islamarkaana soo jiidata indhaha mukhalasiinta wadankan qoxootiga usoo dira .
wasiirku wuxuu sheegay in caydha wadankani qoxootiga siiyo laga dhigo mid la siman caydha ay siiyaan qoxootiga kale ee ku sugan qaaradda yurub .
Hadaba xeerka caydha ee uu wasiirku ka hadlay ayaa dhigaya in qoxootiga kaamamka ku jira lasiiyo qofka kaligii ah (single) 135 -162 € qoyska waxa loogu talogalay 129€,caruurta/ilmaha iyadoo ay ku xidhantahay da,doodq 78 € .
qofku markuu kaamka ka baxo waxa la siin doonaa soolanag ama qofka aan qoys ahayn 216€ halka qoyska lasiin doono 122 qofkiiba .
Wasiir Thomas waxa uu sheegay in qoxooti badan oo diidmo la siiyey ay sameeyaan dariiqooyin nadan oo ay sharciga kula gorgortamaan kagana gabadaan in la masaafuriyo.
Wasiirku waxa kale oo ka hadalay vadaadiska la saarayo wadanka poland iyo Hungry oo iyagu ka tirsan midowga yurub hadana diidaya inay qaataan qoxootiga islamarkaana dacwadi kaga socoto maxkamadda midowga yurub.
Si kastaba ha ahaate mar dhaw waxaa fooda kusoo haayo dalka jarmalka doorashadii guud ee dalka oo mar dhaw si habsami leh ugu bilaaban doono guud ahaan dalka jarmalka .